Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda S.Ogadenya ee Riyadh oo shir balaadhan isugu yimid ay ku go’aansadeen
Jaaliyadda S.Ogadenya ee Riyadh oo shir balaadhan isugu yimid ay ku go’aansadeen
Posted by ONA Admin	/ February 23, 2013
Waxaa shirkoodii billaha ahaa isugu yimid jaliyada Riyaadh shirkasoo ay ka soo qaybgaleen dadwaynaha dagan nawaaxiga caasimada dalka Sacuudiga oo si aan caadi ahayn uga soo qaybgalay shirka.
Gudoomiyaha Jaliyada mudane Guuled Wali Jaanyar ayaa foray shirka, ka dibna sidii caadada ahayd waxaa laga akhriyay madasha shirka ayadaha quraan ka kariimka ah sheikh Axmad Maxamed Cali oo halkaa kasoo jeediyay muxaadiro diiniya oo ku saabsanayd halganka uu ku jiro shacabka S.Ogadenia wuxuuna sheikha faahfaahiyay sida uu xaqa u yahay halgan, waxaana dadkii maqlayay muxarada diiniga ah wajigooda ka muuqatay shucuur add u sareysa.
Muxaarada diiniga ah ka dib, waxaa lagu soo dhaweeyay naftiihure Maxamuud Maxamed Cabdi oo jaliyadda aad ugu booriyay inay ka mid yihiin maanta xooga iyo maskaxda dalka iyo dadka oo waajib uu ku yahay qof walba oo wadankaas u nasab sheegta inuu halganka ka socda Ogadenya inuu ku dadaalo sidii naf iyo maalba loogu hurilahaa. Wuxuu kaloo u sheegay xubnaha ka soo qaybgalay shirka inuu halganka yahay abkasoo gaadh uu jiilba-jiil ku reebay, isagoo intaa raaciyay in jiilka maanta soo gadhay uu yahay jiil nasiib badan, sababtoo ah waxaa la hayaa wadadii saxda ahayd ee lagu gaadhi lahaa guusha gobanimada.
Waxaa kaloo shirka ka hadlay xubna ka mid ah jaaliyada, waxaana bulshada shirka timid si aada looga digay shirqoolada uu gumasigu qorba-joogta u soo safriyay, ka dib markuu ku fashilmay gudaha inkastoo uu xasuuq iyo xadgudub badan u gaystay dadka shacabka ah een waxba galabsan.
Waxay dadkii ka soo qaybgalay shirka isku raaceen inay meel uga soo wada jeedsanayaan wax kasta oo xojinaya midnimada oy ishor-taagayaan waxii wax u dhimaya bulshada, diyaarna u yihiin siday u fashilin lahaayeen gumaysi kal-kaalka iyo ujeeda kasta oy wataan.
Ugu dabayntii , waxaa shirka uu ku dhamaaday guul, waxaana lagu gudoonsaday ujeedooyinkii loo qabtay shirka.